Home » Catalog » CentOS » x86_64 » Applications » Productivity » openoffice.org-langpack-zu_ZA-3.1.1-19.10.el5_8.4.x86_64.rpm » Content »
pkg://openoffice.org-langpack-zu_ZA-3.1.1-19.10.el5_8.4.x86_64.rpm:12661030/usr/lib64/openoffice.org3/share/readme/ info HEADER downloads
openoffice.org-langpack-zu_ZA - Zulu language pack for openoffice.org… more info»
Izinkinobho zezindlela ezimfushane
Ngokhiye bezindlela ezinqamulelayo kuphela (inhlanganisela yokhiye) labo abangasetshenziswanga yi-operating systemabangasetshenziswa ku OpenOffice.org. Uma inhlanganisela yokhiye be-OpenOffice.org ingasebenzi njengoba kuchazwe Osizweni lwe-OpenOffice.org, hlola ukuthi leyo ndlela enqamulelayo ayisetshenziswa kakade kwi-operating system. Ukulungisa lokho kungqubuzana, ungashintsha izinkinobho ezabiwe yi-operating system yakho. Kungenjalo, ungashintsha noma yiyiphi inkinobho eyabiwe ku OpenOffice.org. Ukuze uchazelwe kabanzi ngalesi hloko, hlola Usizo lwe OpenOffice.org noma amadokhumenti Osizo e-operating system yakho.
Ngokuhlela kwenjwayelo, amafayili ahlala ekhiyiwe ku OpenOffice.org. Ukususa lokhiye, kufanele uhlele izimo ezizungezile ezihlelekile SAL_ENABLE_FILE_LOCKING=0 and export SAL_ENABLE_FILE_LOCKING. Lemibhalo isise simweni sokwenza kwifayili lohlaka lwe-soffice.
Isexwayiso: Ukunyakazisa ingxenye yokukhiya ifayela kungabanga izinkinga nge-Solaris 2.5.1 kanye no- 2.7 esetshenziswe nge-Linux NFS 2.0. Uma indalo yesistimu yakho inalemibandela, siyatusa ukuthi ukugweme ukusebenzisa ingxenye yokukhiya ifayela. Uma kungenjalo i-OpenOffice.org izolenga uma uzama ukuvula ifayela elisuka efayeleni ohlwini lwamafayela olunyusiwe lwe-NFS olusuka kwikhomputha yakho ye-Linux.
Sicela uthathe isikhashana ugcwalise imininingwane engemingaki yoku Bhaliswa Komkhiqizo lapho ufaka loluhlelo lwe software. Nakuba ukubhalisa kungaphoqelekile, sikukhuthaza ukuba ubhalise, ngoba lokhu kwaziswa kwenza umphakathi ukwazi ukwenzaizinhlelo ze-software ezingcono futhi ezibhekela izidingo zabasebenzisi ngokuqondile. Ngenxayo Mgomo Wayo Wokugcina Izinto Ziyisifuba, Umphakathi we-OpenOffice.org wenza konke okusemandleni ukuvikela iminingwane ebalula uqobo lwakho. Uma kwenzeka uphutha ukubhalisa ngenkathiufaka uhlelo, ungabuye ubhalise nanganoma yisiphi esinye isikhathi ku
Kukhona futhi Umbuzo Womsebenzisi etholakala ngaphathi koxhumano esikukhuthazayo ukuthi uligcwalise. Iphepha lemibuzo Yomsebenzisi lisiza i-OpenOffice.org ikuba isebenze ngokushesha ekumiseni umgangatho wokudalwa kwesizalwane esisha sehhovisi. Ngalo mgomo Wangasese, Umphakathi we-OpenOffice.org uqinisekisa ukuvikeleka kolwazi lwakho lwangasese.
Ukuze uthole usizo mayela ne OpenOffice.org 2.0 office suite, bheka amaqoqoagciniwe ukuze uthole imibuzo esiphenduliwe ohlwini lwe posi lwe 'users@openoffice.org' ku http://www.openoffice.org/mail_list.html. Uma kungenjalo, ungathumela imibuzo yakho e- users@openoffice.org. Khumbula ukujoyina ohlwini ukuze uthole impendulo yeposi lekhomputha.
Bheka futhi uhlu lwe FAQ ku http://user-faq.openoffice.org/.
Bika Amagciwane & Nezinkinga
Isiza se-Internet se-OpenOffice.org sethula i-IssueZilla, okuyindlela yethu yokubika, yokulandela kanye nokuxazulula izinkinga zamagciwane kanye nokunye. Sikhuthaza bonke abasebenzisi ukuba baziwebenelungelo futhi bemukelekile ukubika izinkinga ezingase zivele ekusebenzeni kwabo. Ukubika izinkinga ngomdlandla kungenye yezindlela ezibaluleke kakhulu umphakathi wabasebenzi ongafaka ngazo isandla ekuthuthukisweni okuqhubekayo nokwenziwa ngcono kwalolu hlelo lweqoqo lwezisetshenziswa ze khomputha.
Indlela Ongahileleka Ngayo
Umphakathi we-OpenOffice.org ungazuza kakhulu ekuzinikeleni kwakho ekuthuthukisweni kwalomsebenzi wemvelaphi evulelekile.
Njengomsebenzisi, usuyigxenye ebalulekile yokuthuthukiswa kwalenqubo yalolu hlelo futhi sifisa ukukukhuthaza ukuba ubambe iqhaza ngokubonakalayounombo wokufaka isandla isikhathi eside ezintweni zomphakathi. Sivela ukuba ujoyine bese ubheka ikhasi labasebenzisi ku: http://www.openoffice.org
Sithemba ukuthi uyakujabulela ukusebenza nge OpenOffice.org 3.1 entsha futhi uzosijoyina kuxhumano lwethu.
Umphakathi we OpenOffice.org
Ikhodi Lemvelaphi Elisetshenzisiwe/Elilungisiwe
Izingxenye Zelungelo lokushicilela 1998, 1999 James Clark. Izingxenye Zelungelo Lokushicilelala Lenhlanganiseli Yezokuxhumana ye-Netscape 1996, 1998.